Etu ịtọ ntọala oge na Instagram | Gam akporosis
Ignacio Sala | 22/07/2021 16:00 | Ngwa gam akporo, Nkuzi
Ebe ọ bụ na Mark Zuckerberg zụtara Instagram, netwọkụ mmekọrịta a etoola site na mmali na oke dị otu ahụ na Facebook ha amalitela ichegbu onwe haEbe ọ bụ na ọ bụrụ na ọ na-ejigide ogo uto, n'oge na-adịghị anya, ọ ga-akarị Facebook n'ọtụtụ ndị ọrụ.
Akụkọ Instagram bụ otu n'ime ngwaahịa ndị kachasị ewu ewu, mana ọ bụghị naanị. Ihe ọzọ na-adọrọ mmasị bụ ohere ị nwere itinye oge na mbipụta anyị, ọrụ mara mma nke ga-enye gị ohere idobe uche nke ndị na-eso ụzọ gị ma ọ bụrụ na ị jiri ya nke ọma. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ka tọọ oge na Instagram, M na-agba gị ka ị na-agụ.
1 Kedu ihe bụ oge Instagram
2 Etu esi tinye oge Instagram
2.1 Naanị dị na Akụkọ
2.2 Tinye ngụ oge na Akụkọ gbasara Instagram
2.3 Ihe post ahụ yiri ka ọ bụ oge
2.4 Enwere m ike ịgbakwunye ngụ oge na kọmputa?
3 Etu esi hazie mbipụta nke mmemme na Instagram
3.1 Kedu ihe anyị nwere ike iji Hootsuite mee
3.2 Kedu ihe anyị nwere ike iji Onye Okike Studio mee
Kedu ihe bụ oge Instagram
Ekwesịrị ịme ngụgụ oge nke Instagram na arụmọrụ ndị ọzọ na-adabereghị na netwọkụ mmekọrịta, dị ka, scheduletọ oge oyiyi ikenye ma ọ bụ jiri ngụda iji mee ndị nwudo ma ọ bụ vidiyo anyị chọrọ ibipụta na netwọkụ mmekọrịta.
Oge Instagram bụ ọrụ na-enye anyị ohere itinye ngụkọta na onyonyo ma ọ bụ vidiyo anyị na-ebipụta na netwọkụ mmekọrịta, ngụda nke mmelite di omimi na nke ahụ na-enye ohere ime ka ndị na-eso ụzọ nọrọ na nkwenye tupu ọkwa nke mmemme pụrụ iche, icheta dị ka a ga - asị na ọ bụ ihe omume na usoro ihe omume ...
Oge a bụ ezigbo maka otu ndị enyi na ndị mmadụ ama ama nwere ọtụtụ ndị na-eso ụzọ dịka ọ na-enye gị ohere ichetara ha oge ha hapụrụ ịga njem, emume ncheta ọmụmụ, oge fọdụrụ iji zukọ maka nri abalị ma ọ bụ ịga mmemme ma ọ bụ mmemme nkwupụta pụrụ iche.
Etu esi tinye oge Instagram
Naanị dị na Akụkọ
Ihe mbụ ịmara banyere oge Instagram bụ nke ahụ enwere ike iji ya na Akụkọ (Akụkọ). Ọ gaghị ekwe omume iji oge na ihe ndị dị na ya, ebe ọ bụ na amara nke ọrụ a kpamkpam.
Akụkọ Instagram nwere oge kachasị elu nke awa 24, mgbe nke a gasịrị, a na-ehichapụ ha na-akpaghị aka na-ahapụghị akara na netwọk mmekọrịta, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị chọrọ ịdebe ha, anyị nwere ike ibudata ha site na ngwa dị iche iche.
Isi ihe ọzọ dị mkpa nke anyị kwesịrị ịma tupu ịmalite iji ọrụ a bụ Instagram, naanị ya na-enye anyị usoro ịda mba, nke ahụ bụ, anyị enweghị ike ịhazi usoro nke a, yabụ anyị ga-edozi maka nke ọ na-enye anyị.
Eleghi anya oge na-aga, ọ bụrụ na njirimara a na-aga n'ihu na-ewu ewu, Instagram ga-enye nsogbu tinye usoro ngụda dị iche iche, mana n'oge ahụ enweghi ozi na-egosi n'echiche a.
Tinye ngụ oge na Akụkọ gbasara Instagram
Ihe mbu anyi gha eme ozugbo anyi banyere ngwa bu pịa bọtịnụ iji bipụta.
Mgbe ahụ na ala, anyị ga-ahọrọ N'etiti nhọrọ dị iche iche egosiri: Akwụkwọ, Akụkọ, Reels na Live, nke abụọ n'ime ha: akụkọ ihe mere eme, ebe ọ bụ na anyị agaghị ahụ nhọrọ ị gbakwunye ngụ oge.
Ọzọ, ozugbo anyịdekọtara vidiyo nke akụkọ ahụ ma ọ bụ tinye ihe oyiyi anyị chọrọ ịbụ akụkụ nke akụkọ ahụ, pịa akara ngosi nke a Ihu ọchị.
N'oge ahụ, ihe niile Akwụkwọ mmado dịnụ nke anyị nwere ike itinye na Akụkọ gbasara Instagram. Na ndepụta ahụ, ị ​​ga-ahụ ngụda ngụda.
Ozugbo anyị ahọpụtara oge anyị kwesịrị:
Tinye aha na ngụ oge
Tọọ mgbe anyị chọrọ ka ọ kwụsị
Kwee ka ndị mmadụ gbanye ncheta ma kesaa ụda a n’akụkọ gị.
Ozugbo anyị gbakwunyere oge, anyị nwere ike ịga n'ihu na usoro ndị anyị na-eme mgbe ọ bịara gunyere ederede, onyonyo ohuru, vidiyo… Pịa na bọtịnụ mbipụta.
Ihe post ahụ yiri ka ọ bụ oge
Akụkọ anyị tinyere na ngụda oge, ga-adị maka onye ọ bụla n’ime ndị na-eso anyị. Ndị a, oge ọ bụla ha batara n’akụkọ ihe mere eme anyị, ha ga-ahụ tebul azụ na arụ ọrụ, yabụ na ọ gaghị egosi otu oge fọdụ.
Ọ bụrụ na anyị agbanyela ngbanwe nke na-enye ndị mmadụ ohere ịkekọrịta akụkọ anyị, nke a kwa ga-egosipụta na akụkọ banyere ụmụazụ ha. Ha nwekwara ike ịgbakwunye njedebe nke ngụda na ngwa ncheta nke ha na-eji, ezigbo ọrụ nke na-enye ndị na-eso ụzọ aka ịmara ihe omume a na-ekwu na-enweghị ịmara Instagram n'oge niile.
Enwere m ike ịgbakwunye ngụ oge na kọmputa?
Netwọk mmekọrịta Instagram anaghị ala azụ ịhapụ ndị ọrụ ka ha biputere site na kọmputa site na kọmputa, agbanyeghị, ọnwa ole na ole, amalitela ime ka o kwe omumeAgbanyeghị, ọrụ na-enye anyị ohere itinye akara na Akụkọ Instagram adịghị, opekata mpe n'oge ebipụta isiokwu a (July 2021).
Etu esi hazie mbipụta nke mmemme na Instagram
Ihe mbụ iburu n'uche bụ na ngụ oge nke Instagram na-enye ohere iji gosi ngụda Emelitere ya na oge, ya bụ, oge ọ bụla onye ọrụ hụrụ ya, oge fọdụrụ dị ntakịrị ka ụbọchị mmemme ahụ na-eru nso.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịtọọ mbipụta nke mmemme, anyị ga-abanye na ngwa nke anaghị akwụ ụgwọ dịka Ụlọ nkwari akụ. Nhọrọ ọzọ, nweere onwe ya kpamkpam Onye Okike Studio, Ngwa Facebook nke na - enye gị ohere ịmepụta na ịtọọ oge posts site na kọmpụta.
Nanị ụzọ ị ga-esi mee akụkọ akụkọ gụnyere ịgụnye ọnụ ọgụgụ naanị site na Hootsuite. O di nwute na nhọrọ a adighi site na ngwa Onye Okike Studio nke Facebook, obu ezie na o nweghi isi.
Kedu ihe anyị nwere ike iji Hootsuite mee
Hazie oge vidiyo na ihe oyiyi.
Tọ oge Akụkọ posts.
Tọ oge Carousel Mbipụta
Kedu ihe anyị nwere ike iji Onye Okike Studio mee
Hazie oge izipu na IGTV
Anyị amaghị ihe kpatara Onye Okike Studio anaghị ekwe ka ịtọọ mbipụta nke Akụkọ, mana dịka m kwuru n'elu Enwere m obi abụọ na enwere mmachi site na ụlọ ọrụ n'onwe ya ebe ọ bụ na ha na-enye ohere a site na Hootsuite.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Etu ị gha esi edobe ngụ oge na Instagram